» Kooxda AC Milan Oo San Siro Cashar lama ilaawaana Ugu Dhigtay Barcelona Monday, April 21st, 2014
Kooxda AC Milan Oo San Siro Cashar lama ilaawaana Ugu Dhigtay Barcelona
Feb 21, 2013 - jawaab	Aqrisatay:3501Kooxda ku guuleysatay 7da jeer koobka Champions League ee AC Milan ayaa talaabo muhim ah u qaaday wareega 8da ee koobka Champions League ka dib markii ay 2-0 ku garaaceen kooxda Barcelona oo marti ku aheyd San Siro lugta hore ee wareega 16ka Champions League.
Barcelona ayaa ciyaarta ku bilaabatay iyadoo kubada inteeda badan heysata, islamarkaana ciyaarayay kubadooda isku dhiibdhiibka ah, laakiin AC Milan oo qeybtii hore inta badan daafac ku jirtay ayaa heshay fursadihii ugu fiicnaa ee qeybtii hore.
Daqiiqadii 14aad ayaa El Shaarawy waxaa loo dhex bixiyay kubad qatar ah isagoo goolka ka soo galay dhanka bidix laakiin waxa uu ka daahay inuu darbo la tiigsado shabaqa uu waardiyaha ka ahaa Valdes waxaana ku soo gaaray Puyol oo ka bixiyay.
Koonerkii ay heshay Milan ayaa El Shaarawy uu kubad baas dheer u soo dhigay Boateng oo afka hore ee diilinta ganaaxa taagnaa, kaasoo isna kubad qatar ah goolka la abaaray, laakiin si ciriiri ah ayay ku agmartay.
Daqiiqadii 34aad ayaa sidoo kale karoos qatar ah oo uu soo dhigay Boateng oo goolka hortiisa waxaa seegay El Shaarawy taasoo u ogolaatay in Valdes uu gacanta ku dhigo kubada.
Waxaana qeybtii hore oo Barca ay kubada inteeda badan heysatay iyo Milan oo fursadihii ugu fiicnaa abuurtay lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
11 daqiiqo markii ay socotay qeybtii labaad ayaa Milan ay hogaanka qabatay markii Montolivo darbo xoogan oo uu tuuray ay gacanta kaga dhacday Zapata ka hor inta uusan helin Kevin-Prince Boateng oo darbo xoogan oo hoose ku dabamariyay goolhaye Victor Valdes, Barca ayaa ka dooday goolka laakiin garsooraha ayaa ansixiyay.
Boateng ayaana dhaliyay goolkiisii 4aad ee Champions League ahaana goolkiisii labaad ee uu ka dhaliyo Barcelona isagoo hogaanka u dhiibay kooxdiisa Rossoneri.
Barca ayaana isku dayday inay raadiso goolka barbaraha, laakiin taatikada AC Milan ee ciyaarta oo ku dhisneyd mid daafac sarre ah iyo counter-attack fiican ayaa u diiday in kubad heysashadooda ay ka faa’ideystaan islamarkaana dhibaato xitaa u abuuraan Abbaiti.
Laakiin Rossoneri ayaa hogaanka ciyaarta dheereysatay ciyaarta oo 10 daqiiqo dhiman ka dib markii ay dhaliyeen goolkoodii labaad ee ciyaarta, Niang oo bedel ku soo galay ayaa xerada ganaaxa dhexdeeda kubad ugu dhigay El Shaarawy kaasoo isna kubada u sii wareejiyay Muntari oo ka soo galay dhanka bidix islamarkaana shabaqa kubada dhex dhigay.
Milan ayaana hogaanka ku qabatay 2-0 iyadoo labada goolba ay u dhaliyeen xiddigo ka soo jeeda Ghana, Muntari ayaana kulankiisii ugu horeysay ee Champions League ee AC Milan kula dabaaldegay gool.
Inkastoo Barca ay raadisay inay hesho ugu yaraan gool marti ah, hadana daafaca AC Milan ayaa ka horjoogsaday, kuwaasoo ku guuleystay inay xaqiijiyaan in ciyaarta ay 2-0 ku dhamaato.
Labadaas gool ee muhimka ah iyo shabaqa ay ilaashatay ayaa ugu filnaa AC Milan inay 2-0 kaga talaabsato kooxda Barcelona, iyadoo haatan Diavolo ay talaabo muhim ah u qaaday wareega 8da Champions League, waxaana ay bisha soo socota booqan doonaan Camp Nou kulanka lugta labaad.
Kulanka kale ee wareega 16ka kooxaha Galatasaray iyo Schalke ayaa iyagana ku kala baxay barbaro 1-1 ah.